Maalinta: Sebtember 30, 2019
Dhibaatada Galitaanka Terminal Baska ah ee Isku-xidhka Magaalada Diyarbakır waa la xaliyay
Guddoomiyaha Diyarbakir iyo Duqa Magaalada Caasimadda ah ee V.Hasan Basri Guzeloglu, ayaa la qorsheeyay in uu ka hor yimaado qawaaniinta taraafikada ee Diyarbakir Inter Terityal Enterprises (DTITI) oo dib loo habeeyay si loogu adeego shacabka. muwaadiniinta [More ...]
Koorsada Daryeelka Caruurta ee Eskişehir
Ka sokow bixinta adeegyada latalinta bilaashka ah ee haweenka, degmada Eskişehir Caasimadda waxay sii wadaa dadaalkeeda ku aaddan sidii ay ugu xoojin lahayd xirfadaha nolol maalmeedka haweenka iyada oo loo marayo koorsooyinkeeda. Ugu dambeyntiina, 'Gaariga Haweenka' oo ay soo abaabushay Unugga Sinaanta [More ...]
Daabacaaddii saddexaad ee Bandhigga Gacanka 'İzmir Gulf Festival', oo ay soo qabanqaabisay Dawladda Hoose ee Magaalada İzmir, ayaa laga tegay iyada oo ay ku jiraan tartamo xiiso leh iyo sawirro midab leh. Tunç Soyer, Duqa Magaalada Caasimadda ah, ayaa abaalmarinnada gudoonsiiyey dadkii ku guuleystey maalinta ugu dambeysey damaashaadka. [More ...]
Tababbarka Dhaqanka Magaalada ee Bilaashka ah oo loogu talagalay carruurta fromzmir
Ereyga cusub ee 1 ee “Barnaamijka Dhaqanka Magaalada iyo Barnaamijka Taariikhda Taariikhiga ah” oo ay diyaarisay İzmir Magaalo Weynta Magaalada ee ardayda fasalka afraad iyo shanaad waxay bilaabmayaan Talaadada bisha Oktoobar. Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir Ahmet Piriştina City Archive [More ...]
Khatarta weyn ee Wadada Isku Xidha Istanbul
Khadadka tareenka ee 2017 5 ee gundhigga qandaraaska khasaaraha dadweynaha ee qiyaastii bilyan TL 1.2 bilyan ayaa yiri. Khadkii tareenka ee 5, oo laga xaraashay, ayaa u rogay wax shaqo ah muddo ah 1,5 sannado. Khadadka dhici kara [More ...]
TÜVASAŞ'ta shaqaalaha mushaharka hooseeya ee hoose ee jaray mushaharka xad-dhaafka ah ee lagu siiyay xasillooni darrada ayaa sii socota. Codsiga Maareynta ee gunnooyinka dheeraadka ah waa la diiday. XADDHAHA QARAXYADA 13 ee TÜVASAŞ [More ...]
Kanaalka DHMİ ee ka baxa Warbixinta Istanbul ayaa la Bedelay
Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka ayaa sameeyay qiimeyn muujinaya in aysan ogolaan mashruucan iyaga oo leh It Waxay ka dhigeysaa gegada diyaaradaha ee Istanbul mid aan caadi aheyn mashruuca Kanal Istanbul. Laba usbuuc kadib, tani waxay ahayd talaabo ka soo noqotay qiimayntiisa. [More ...]
Adeegyada basaska waxay ka bilowdeen Mustafakemalpaşa ilaa Isbitaalka Magaalada Bursa
Adeegyada basaska waxay ka bilowdeen Mustafakemalpaşa ilaa Isbitaalka Magaalada Bursa. Gaadiidka tooska ah ee laga keenay magaalada Mustafakemalpaşa Isbitaalka Magaalada Bursa ayaa bilaabmay. Shirkadda gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Bursa BURULAS, 801 / T khadka ayaa loo geliyey adeegga muwaadiniinta si ay u bixiyaan gaadiid ku habboon. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa, oo diiradda saareysa maal-gashiga 'smart magaalooyinism' ee mashaariicda mustaqbalka Bursa qabaneysa, ayaa bilaawday inay miro-dhaliso howlaheeda howleed. Sanduuqa Samafalka ee Boqortooyada Midowday, oo ku dhex jira "Magaalooyinka Mustaqbalka" [More ...]
IMM waxay ku dhawaaqdaa Sababta Cufnaanta ku jirta Joojinta mitrooga
Isku xirka magaalooyinka waa weyn ee Istanbul (IMM) ayaa istaagay subaxnimadii, wuxuuna sheegay in xoojinta gaariga ay sabab u tahay fashil. Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul ayaa saaka ka sheegtay magaalada Istanbul: 07: khadka tareenka ee at [More ...]
BB, Sirkeci iyo Xarunta tareenka ee Haydarpa Stationa waxay codsadeen in la siiyo iyada oo aan la ogeysiin
Istanbul degmada Metropolitan (IMM) Madaxweynaha İmamoğlu, Demiryolları'n Jamhuuriyadda Turkey (TCDD) Taariikhda la soo saaray gundhigga ah Sirkeci iyo Haydarpaşa Station, doonayay inay iyaga wax lagu wareejiyo aan gorgortanka. Sida uu ku waramay wargayska Diken; "Gazette Rasmiga ah [More ...]
Sheegashooyinka Argagaxa leh ee ku saabsan shilka tareenka Bilecik!
Ku xigeenka CHP Eskişehir Utku Çakırözer ayaa la wadaagay dadweynaha sheegashada qabriga ee ka dhacey shilka tareenka ee ka dhashay burburka tareenka haga ee xukumaya khadka tareenka xawaaraha sare ku yaal ee Bilecik. Halka uu shilku ka dhacay [More ...]